ညမင်းသား: မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးသူများ သတိပြုစရာ
မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးသူများ သတိပြုစရာ
အခု ပို့စ်လေးက ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်က ရှာဖွေတွေ့ရှိလို့ အကျိုးရှိမယ် ထင်တာနဲံ့ ပြန်လည် ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အခုခေတ်က မိုဘိုင်းလက်ကိုင်ဖုန်း အသုံးပြုမှုက တွင်ကျယ်လာတော့ ရှောင်ရန် ဆောင်ရန်လေးတွေအတွက် သင့်တော်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
----မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးသူများ အတွက် အရေးပေါ် သတိပေးချက်လေးပါ -ကျွန်တော် တတ်သလောက်ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ် .....
ဒါကိုဖတ်ကြည့်ပါ .... MIAMI ဆေးရုံးက အရေးပေါ် အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ သတိပေးချက်ပါ
"ကျွန်တော် အမြဲ တမ်းဒီလို လုပ်တတ်ပါတယ်... ဒါကိုဖတ်ပြီး ဒီလို နောက်တစ်ခါ မလုပ်တော့ပါဘူး "
လွန်ခဲ့တဲ့ နေ့က လူတစ်ယောက်ဟာ မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးကို သူ့ အိမ်မှာ အားသွင်းခဲ့ပါတယ်
အားသွင်းနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ....အ၀င်ဖုန်းကော တစ်ခု ၀င်လာပါတယ် ...ဒါနဲ့ သူက ဖုန်းကို အားသွင်းနေတုန်း ပလပ်မဖြုတ်ပဲ ကြိုးတန်းလန်းနဲ့ အ၀င်ကောကို လက်ခံဖုန်းပြောခဲ့ပါတယ်......Seconds အနည်းငယ်အကြာလေးမှာ ..... သူပြောနေတဲ့ ဆဲလ်ဖုန်းမှာ လျှပ်စစ်တွေ အထိန်းအချုပ်မရှိ စီးဝင်ခဲ့ပါတယ်....ပြီးတော့ အဲဒီလူငယ် ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို အလွန်ပြင်းထန်တဲ့အရှိန်နဲ့ရိုက်ခတ်ပြီး လဲကျသွားပါတယ်.......
အခု ပုံမှာ မင်းမြင်တဲ့ အတိုင်း .....ဖုန်းဟာ အမှန်တကယ်ပေါက်ကွဲခဲ့ ပါတယ်.....
ကောင်လေး ရဲ့ မိဘတွေ သူ့ အခန်းထဲ ကို အသံကြားကြားချင်း ပြေးဝင်လာကြတဲ့ အခါလက်တွေလောင်နေပြီ နှလုံးခုန်နှုန်း မရှိသလောက် နဲ့ သတိမေ့မျောနေတဲ့သူ့ ကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်.....
သူ့ကို နီးစပ်ရာဆေးရုံကို အရေးပေါ်ပို့ ဆောင်လိုက်ရပါတယ်..... ဒါပေမဲ့ဆေးရုံအရောက်မှာ သူဟာ စကားလေးကိုတောင် ပီသအောင် မပြောနိုင်တော့ပါဘူး... ... !!!!!
ဆဲလ်ဖုန်းဖြစ်တဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေဟာ ဒီနေ့ မော်ဒန်ခေတ်မှာ အရမ်းကို အရေးပါ ပါတယ်...
သို့ သော်လည်း....ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဒီမိုဘိုင်းဖုန်းဟာ ...ကျွန်တော်တို့ ကို အသက်ကို သေစေနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခု လည်းဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာ သတိပြုရပါမယ်.......
*** ဆဲလ်ဖုန်းတွေကို ပလပ်မှာအားသွင်းနေစဉ် လုံးဝအသုံးမပြုပါနဲ့ .......မင်းအားသွင်းနေတုန်း ဖုန်းဝင်လာရင် လည်း ပလပ်ကနေ ဖြုတ်ပြီးမှသုံးပါ......
ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီဟာကို လူများများကိုမင်းတတ်နိုင်သလောက် Share ပြီး ဒီအကြောင်းကို အားလုံးသိလာအောင် လုပ်ပေးပါ ......
Translated by: Zan Htet Ko
(ဘာသာပြန်တာ ဆီလျော်အောင်ပြန်ရတဲ့အတွက် အသုံးအနှုန်းမှားရင် သည်းခံဖတ်ပေးပါ ...မူရင်း စာစောင်ရဲ့ အရေးအသား ကို အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်)
READ THIS!!!! IMPORTANT FROM THE UNIVERSITY OF MIAMI HOSPITAL .....VERY SERIOUS WARNING...
However, we must be aware that it can also be an instrument of death.http://www.blogger.com/img/blhttp://www.blogger.com/img/blank.gifank.gif
PLZ SHARE IT Maximum as u Can and let all come to know about this.!!
ဘာသာပြန်သူရဲ့ မူရင်းဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာကို ဒီနေရာလေး ကို နှိပ်ပြီးလည်း သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အယ်လ်ဇိုင်းမား လူနာများအတွက် သတင်းကောင်း
Facebook Watching UR social Chat
ချင်းမိုင် တက္ကသိုလ်မှာ မြန်မာ့ မီဒီယာအကြောင်း ဆွေး...
စင်ကာပူမှာ အမျိုးသားများ သတိထားရန်
ဒေါ်စု အဆိုနှင့် မေးခွန်းများတွင် ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမ...
တရား ဥပဒေ ဘာလဲ (နှလုံးမကောင်းသူများ မကြည့်သင့်ပါ)